Haweeneyda leh lixdaan sifo waa dookha nin kasta | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Haweeneyda leh lixdaan sifo waa dookha nin kasta
Aayaha editor Send an email February 11, 2019
Helitaanka haweeney qalbi wanaagsan ma ahan wax sahlan, waa guul aan caadi ahayn, haddii heshayna waa farxad iyo guul cajiib ah oo aad gaartay.
Waxaa jira sifooyin ay leeyihiin haweenka noocaas ah. Hoos ka aqriso.
Qof kasta malahan qalbi wax cafiya; mararka qaar dad ayaa sheegta inay wax cafiyaan balse qalbiga ayay wali cuqdad ku hayaan.
Haweeneyda qalbiga wanaagsan waa mid wax cafin karta iyadoo aanan waxba qalbiga qofka ugu heyn, haweeneyda noocaas ah waa dookha nin kasta.
Dabeecaddaas qof lehna wuu yaryahay.
Maalmahan inaad hesho qof dabeecad wanaagsan waxay lamid tahay adigoo helay dahab, balse haweeneyda qalbiga wanaagsan waa dahab; waa mid uusan hadalka kaliya dhab ka ahayn balse sidoo kale ficilka uu dhab ka yahay.
Dacaadnimadu waa dhaqan wanaagsan oo ay leedahay haweeneyda qalbiga wanaagsan oo kaliya. haweeneyda noocaas ah waa dookha nin kasta.
Hal dhibaato oo ragga badankooda ay ka ooyaan maanta ayaa ah sida haween badan ay u yihiin kuwo aanan ixtiraam lahayn.
Haweeneyda qalbiga wanaagsan waa mid ixtiraam badan xittaa waxa markaas haddii ay yihiin kuwo yar,sidoo kale waa qof ay qiimo ugu fadhiyaan wax kasta oo loo sameeyo. haweeneyda noocaas ah waa dookha nin kasta.
Haweeneyda qalbiga wanaagsan waa mid jecel seygeeda; kuma jeclo lacag ama farxad; balse waa mid ku jecel shaqsiyadiisa iyo qofka uu yahay.
Ma ahan mid seygeeda uga tageysaa waxyaabaha qaarkood, waa mid seygeeda si dhab ah u jecel haddii uu wax heysto iyo haddii kale. haweeneyda noocaas ah waa dookha nin kasta.
Haweenka oo dhan maahan kuwo naxariis badan. Haweeneyda qalbiga wanaagsan waa mid kamid ah calaamadaha lagu yaqaan naxariista iyo qalbi wanaageeda waana wax ay dheertahay haweenka kale. haweeneyda noocaas ah waa dookha nin kasta.
Gabadha qalbiga wanaagsan waxay leedahay qalbi weyn oo ay waxyaabo badan ugu samirto, haddii ay noqon lahayd, qoyskeeda, jacaylkeeda, riyooyinkeeda, shaqada iyo waxyaabo kale oo badan, waa qof horusocod ah oo go’aan leh. Waa qof dhiiri gelin leh oo dulqaad badan. haweeneyda noocaas ah waa dookha nin kasta.